ထုတ်လွှင့်ဒီည LIVE 19.00: Holmes – ကုဗတုံး | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 25 မေ, 2016 အားဖြင့် Holmbygden.se
ယနေ့ည 19:00 IF Kubikenborgs ဆန့်ကျင် Holmes SK ကိုဆော့ကစား2Holmes Vallen မှာနေအိမ်. ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း penultimate အိမ်မှာဂိမ်း, ဒါကြောင့်ကော်ဖီရေနွေးငွေ့ခွက်ကိုနှင့်ကို kiosk ကနေအရသာရှိတဲ့ဘာဂါနှင့်အတူအရပ်ဌာန၌ဂိမ်းကိုမြင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ.
Holmbygden.se တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပွဲစဉ်. ခရိုင်၏အားကစားမက္ကာ hemmma တက်ရောက်ရန်အခွင့်ထူးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့အဘို့, ဒီ website ကိုကြည့်ရှုဖို့လည်းကောင်းသောဂိမ်းသွားပါ. ဒေသခံသတင်းထောက် Fredrik Wikholm အကြံအဖန်ပွဲကင်မရာဟာ HSK တပ်၌ကျွမ်းကျင်သူဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်အတူပွဲစဉ်ထုတ်လွှင့်အတူလိုက်ရုံမရောက်မီ.
ဒီညရဲ့စီး (“ပါဝင်သော” အထက်): https://www.youtube.com/watch?v=j4eaYA1uvPE